UNksz Santhana Pillay ehamba nabafundi abasha basekolishini lakwaHumanities esikhungweni iHoward College.
Umkhandlu wesigungu sabafundi (iSRC) negumbi eliyisibonelo, iMentorship Office, basebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi abafundi abasha bathole lonke usizo abaludingayo ngezifundo zabo ngokuqala konyaka.
Izikhungo bezisebenza ndawonye ukuze bamukele abafundi enyakeni wabo wokuqala enyuvesi. Ezikhungweni zonhlanu zeNyuvesi ukwamukelwa kwabafundi kuqale ngokuthi baziswe ngayo, baphinde bamukelwa abebemele izikole ezahlukene.
Ekolishini lakwaHumanities esikhungweni saseHoward College, kuchithwe ulwazi ngezokubhalisa nangezinsiza zimali. I IWriting Place eseyehhovisi lakwaStudent Support lingezinye yezinto ekukhulunywe ngazo zokusiza abafundi bakwazi ukubhala ngendlela efanele kwiMfundo ePhakeme.
Abanye abafundi bajabulele ukufundiswa ngomtapo wolwazi nokuthi bangayisebenzisa kanjani iminyango eyahlukene. Abafundi banikezwe imiqulu ebiqukethe lonke ulwazi abaludingayo ngekolishi labo. Lezincwadi ziqukethe yonke imininingwane abayidingayo ukuze baphumelele ezifundweni zabo.
Abafundi bakujabulele ukuhamba bekhonjiswa inyuvesi. Ithimba ebelikhombisa abafundi lisazoqhubeka nokubasiza noma sebeqale ukufunda.
‘NjengeMentorship Office, umsebenzi wethu ukuthi sisize iSRC ngazo zonke izinto abafuna ukuzenza eNyuvesi ngalesikhathi kufika abafundi. Owethu umsebenzi usuke usuphelile uma abafundi sebebhalisile, bangena ezindaweni zabo zokuhlala sebeqala nokufunda ngobunzima obuncane,’ kusho Nksz Phindiwe Rasmeni (where from?).
‘Kufanele sibeke izindlela zokusiza abafundi bakwazi ukungena kalula eNyuvesi uma bephuma ezikoleni, khona bezozimisela. Siyakujabulela ukuthola ithuba lokuhlangana nabafundi abasha sibasize ukuthi baphumelele uma belana eNyuvesi. Siyalijabulela ithuba lokuvuselela iMentorship Programme eqalwe namaKolishi.’